Sawiro:Madaxweynaha Galmudug oo hortagay Aqalka sare – Gedo Times
Sawiro:Madaxweynaha Galmudug oo hortagay Aqalka sare
15th September 2020 admin Wararka Maanta 0
Madaxweynaha Galmudud Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa maanta hortagay Guddiga joogtada ah ee Golaha Aqalka sare BFS, kadib kulan gaar ah oo lagu casuumay Madaxweyne Qoorqoor.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo xaruunta kusoo dhaweeyay isla markaana hadal kooban jeediyay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay wada shaqeyta Golaha Aqalka sare iyo dowlad Goboleedyada.
Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa Madaxweyne Qoorqoor uga warbixiyay qorsha howleedka golaha iyo sharciyada ay gudbiyeen iyo kuwa horyaalla, isagoo tilmaamay in ay sharciyada horyaalla ay gudbin doonaan.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa isagua la hadlay Guddiga joogtada ah ayaa ka warbixiyay guud ahaan xaaladaha Galmudug iyo horumaradii ay sameeyeen tan iyo markii uu xafiiska tagay, wuxuu si gaar ah diradda u saaray shirirakii Dhuusamareb ay marti galisay iyo guulaha laga gaaray.
Ugu dambeyn Madaxweyne Qoorqoor ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka Muqdisho ka socda inuu kusoo dhammaan doono wanaag iyo isu tanaasul, laguna saxiixo hannaan doorasho oo la isku raacsan yahay, wuxuu sheegay in ay muhiimad gaar ah u leedahay Bulshada sooomaaliyeed qadiyadaha arrimaha doorashooyinka.
Daawo:Xildhibanada oo loo baaqay inay ka tobadkenaan Gafkii ay Diinta u gaysteen
Xasan Shiiq iyo Shiiq Shariif oo eed u jeediyey Dowlada Federaalka ah